WARBIXIN: Is Bar-Bardhig Lagu Sameeyay 10-ka Xiddig Ee Ugu Mushaharka Badan Horyaalka France & Premier League Oo La Soo Saaray & Neymar Oo Cidla Kaga Tagay Xiddiga Ugu Mushaharka Badan Premier League – Kooxda.com
Home 2018 February France, Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: Is Bar-Bardhig Lagu Sameeyay 10-ka Xiddig Ee Ugu Mushaharka Badan Horyaalka France & Premier League Oo La Soo Saaray & Neymar Oo Cidla Kaga Tagay Xiddiga Ugu Mushaharka Badan Premier League
WARBIXIN: Is Bar-Bardhig Lagu Sameeyay 10-ka Xiddig Ee Ugu Mushaharka Badan Horyaalka France & Premier League Oo La Soo Saaray & Neymar Oo Cidla Kaga Tagay Xiddiga Ugu Mushaharka Badan Premier League
Xiddiga diirada u saaran kooxaha Arsenal iyo Liverpool ayaan ka mid ahayn 30-ka xiddig ee ugu mushaharka badan horyaalka Ligue 1 ee France xilli xiddiga reer France bishii helo 100 kun oo Gini.
Xiddiga reer Brazil ee Neymar oo ah xiddiga adduunka ugu qaalisan suuqa kala iibsiga ayaa ah xiddiga ugu mushaharka badan horyaalka France isaga oo qaatay bishii 2.71 milyan sida ay shaacisay wargaka L’Equipe.
Kooxda PSG ayaa 9 xiddig ku leh 10-ka xiddig ee ugu mushaharka badan horyaalka France.
Laakiin Lemar oo 22 jir ah ayaa wali kooxda Monco kula jira heshiiskii uu ugu soo biiray sanadkii 2015 isaga oo aan xitaa ka mid ahayn 10-ka xiddig ee ugu mushaharka badan kooxda Monaco.
10-ka Xiddig ee Ugu Mushaharka Badan Horyaalka France:
Edison Cavani €1.54m
Kylian Mbappe €1.54m
Thiago Silva €1.33m
Angel Di Maria €1.12m
Thiago Motta €875,000
Javier Pastore €770,000
Radamel Falcao €750,000
Dani Alves €700,00
Monaco ayaa lagu soo waramayaa in ay u soo bandhigtay heshiis cusub oo ay doonayso in ay Lemar ka saxiixato heshiis ilaa 2020 ah iyada oo loo samaynayo mushahar dalicid aad u weyn.
Laakiin Lemar ayaa diiday isku dayadii kooxda Monaco isaga oo doonaya in uu isaga tago kooxda kadib koobka adduunka iyada oo kaliya 2 sano ka harsan yahay heshiiskiisa haatan.
Kooxxaha Atletico Madrid,Chelsea,Arsenal,Liverpool ayaa dhamaantood xiiso u qabay saxiixiisa xagaagii laakiin waxa ay u badanathay in lacag ka badan 100 milyan lagu heli doono xagaaga dambe.
Neymar oo ah xiddiga ugu mushaharka badan France ayaa todobaadkii u xaadira lacag dhan 677 kun oo Gini waana lacag si weyn uga badan midka uu Alexis Sanchez oo ah xiddiga ugu mushaharka badan premier league ka qaato Man United.
Xiddiga reer chile ayaa todobaadkii ka qaata kooxda Man United lacag dhan 500 kun oo Gini todoabadkii kadib markii uu United kaag soo biiray Arsenal bishii hore.
Waxa uu ka horeeyaa xiddigii hore ee ay isku kooxda ahaayeen ee Mesuto Ozil kaas oo haatan Arsenal ka qaata lacag dhan 350 kun oo Gini todobaadkii oo uu Arsenal ka qaato.
Paul Pogba ayaa isagu ah xiddiga 3-aad ee ugu mushaharka badan isaga oo todobaadkii u xaadira lacag dhan 290 kun oo Gini todobaadkii.
10-ka Xiddig Ee Ugu Mushaharka Badan Premeir league:
Alexis Sanchez (Manchester Untied – £500,000 Todobaadkii
Mesut Ozil (Arsenal) – £350,000 per week
Paul Pogba (Manchester United) – £290,000 Todobaadkii
Sergio Aguero (Manchester City) – £260,000 Todobaadkii
5= Kevin de Bruyne (Manchester City) – £250,000 Todobaadkii
5= Romelu Lukaku (Manchester United) – £250,000 Todobaadkii
6= Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) – £220,000 Todobaadkii
6= Yaya Toure (Manchester City) – £220,000 Todobaadkii
6= Eden Hazard (Chelsea) – £220,000 Todobaadkii
6= Cesc Fabregas (Chelsea) – £220,000 Todobaadkii
Filed in: France, Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino